အမေဇုံ Fire တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာကိုပြန်လည်သုံးသပ် - သတင်း Rule
အမေဇုံ Fire တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာကိုပြန်လည်သုံးသပ်
ငါ£ 50 ဦးတက်ဘလက်အလွန်နိမ့်မျှော်လင့်ချက်တွေရှိခဲ့. သို့သော်အမေဇုံ Fire ကသူတို့အားလုံးကိုရိုက်ချိုး. ဒါဟာဒါအနည်းငယ်သာကုန်ကျသည့်အခါကဘယ်လောက်မအမှိုက်များအမှန်တကယ်အတော်လေးထူးခြားပြောင်မြောက်ရဲ့.
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “အမေဇုံ Fire တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာကိုပြန်လည်သုံးသပ်: ကိုယ့်£ 50 ဦးအတွက် Tablet တွေအများကြီး” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 12 နိုဝင်ဘာလအပေါ်များအတွက် 2015 07.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Amazon ရဲ့နောက်ဆုံးအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မီးသတ်မေးခွန်းကိုမေးတယ်: ရုံ£ 50 ကိုအသီးအသီးကိုသင်ပြန်သတ်မှတ်တဲ့တက်ဘလက်နိုင်, သို့မဟုတ်ငါးဝယ်အခမဲ့တယောက်ရ, မှာအားလုံးမဆိုကောင်းဖြစ်?
ဒါဟာမူရင်း Fire တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာများ၏ပဉ္စမဗားရှင်းင်, သောပထမဦးဆုံးစတင် 2011 Apple ၏ iPad undercut နှင့်၎င်း၏စာအုပ်များနှင့်ဗီဒီယိုန်ဆောင်မှုကိုရယူတဲ့တန်ဖိုးနည်းတက်ဘလက်ထုတ်လုပ် Amazon ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်.
တစ်ဦးကမျှရိုးရှင်းသောအနက်ရောင် Matt ပလပ်စတစ်ကိုယ်ခန္ဓာ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ထူသော, chunky နှင့်ကြံ့ခိုင်မီးတက်ဘလက်ရဲ့အကောင်းဆုံးဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်. အရောင်အဆင်းမည်းနက်ပလပ်စတစ်ဖုံးလွှမ်း, က 313g အလေးချိန်, 1cm ကျော်အထူနှင့်လက်တော်၌ရှိလေးနက်ခံစားရ.
ဒါကြောင့်ပြဿနာမပါဘဲတစ်ဦးခေါက်သံသို့မဟုတ်နှစ်ခုယူနိုင်လျှင်ကြောင့်ခံစားရ. အမေဇုံကို Fire တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာကိုတစ်ဦးက Apple သည် iPad Air လေကြောင်းလိုင်းအဖြစ်နှစ်ကြိမ်အဖြစ်တာရှည်ခံပြောဆိုထား2ကုမ္ပဏီရဲ့ရဲ့ "လိမ့်ကျခြင်းစမ်းသပ်မှု" တွင်. ငါကောင်းစွာကြောင်းယုံကြည်နိုင်, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားကဖြစ်နိုင်ကြောင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကစား.
အဆိုပါ 7in မျက်နှာပြင်ကို HD မဟုတ်ပါဘူး. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ 7in မျက်နှာပြင်ကို HD မဟုတ်ပါဘူး. ဒါဟာတစ်ဦးကို resolution ရှိပါတယ် 1024 x က 600 pixels ကို, HD ကိုများအတွက်နိမ့်ဆုံး 720p resolution ကိုအောကျတှငျအရာဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအစတစ်အတော်လေးနိမ့် pixel သိပ်သည်းဆရှိပါတယ် 171 လက်မနှုန်း pixels - မအိုင်ပက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်လည်းကုန်ကျစရိတ်၏တစ်ဦးဆဌမထက်လျော့နည်းင်.
သို့သော်မျက်နှာပြင်စျေးနှုန်းအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းလှ၏. ဒါဟာဖြစ်နိုင်သလိုတောက်ပင်, ကောင်းသောကြည့်ရှုထောင့်ရှိပြီးအရောင်အသွေးစုံလင်သည်, ၎င်း၏လူမည်းတစ်နည်းနည်းမီးခိုးရောင်များမှာပင်လျှင်. သို့သော်ထိုသို့တစ်ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းအာရုံခံကိရိယာရှိသည်ပါဘူး, ဒါကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင်ညဘက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်မျက်စိကန်းမဟုတ်မှညှိရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်, ထိုသို့အတိအကျပြတ်သားမယ့်.
Screen ကို: 7တွင် (1024 x က 600) LCD ကို (171ppi)
processor: 1.3GHz မြန်နှုန်း Quad-core
သိုလှောင်ခြင်း: 8GB ကို; microSD slot ပါလည်းရရှိနိုင်
ကင်မရာကို: 2လွှတ်တော်အမတ်နောက်ဘက်ကင်မရာက, 0.3အမတ် front-facing ကင်မရာကို
ဒိုင်မန်းရှင်း: 191 x က 115 x က 10.6mm
အားကစားပြိုင်ပွဲ, apps နှင့်ရုပ်ရှင်များဒဏ်ငွေများမှာ
အဆိုပါ Fire တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာကို On-board ကို user ကလက်လှမ်း space ၏ 5GB ရှိပါတယ်, ပိုပြီးဖြည့်စွက်အဘို့အကာ microSD card slot ပါနှင့်အတူ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
မီး Tablet ရဲ့ 1.3GHz Processor ​​နဲ့ RAM ကို 1GB ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဆင်းသတ်မှတ်သွားကြသည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်သူတို့သည်ငါ၏စမ်းသပ်ခြင်းအတွက်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်နိုင်စွမ်းရှိကြ၏. အဆိုပါ Tablet ကိုစစ်ဆင်ရေးအတွက်အထူးသဖြင့် sprightly မဟုတ်ခဲ့, မရအဲလိုဘဲ-ဝပြောစွာခဲ့သည်.
ဗီဒီယိုများ loaded နှင့်ချက်ချင်းကစား, ဂိမ်းတွေအများဆုံးအစိတ်အပိုင်းတွေအတွက်အဆင်ပြေချောမွေ့ခဲ့ကြ, အရာအပေါ်တက်ဘလက်ရဲ့ပိုကြီးညီအစ်ကို Fire HD ကိုသူ့ကို graphically အထူးကြပ်မတ်ဂိမ်းအပါအဝင် 10 ဆို့. ထိုကဲ့သို့သောမော်ကွန်းတိုင်အမှတ်ချိုင့်အဖြစ်အားကစားပြိုင်ပွဲတစ်ဦးက iPad ထက် load မှကြာကြာယူ, နှင့်ပြေး apps များအကြား switching အခြိနျမှနျမှအနည်းငယ်နှေးကွေးခဲ့, ဒါပေမဲ့ဘာမှမလည်း infuriating ခဲ့သည်.
ဘက်ထရီမျက်နှာပြင်နှင့်အတူဗီဒီယိုပြန်လည်ပြသခြင်း၏ပတ်ပတ်လည်ငါးနာရီလောက်ကြာအများဆုံးရောင်ခြည်အထိလှည့်, ကြာကြာအတူအနည်းငယ်မှိန်. အားသွင်းနှေးနှေးခဲ့, အပြည့်အဝကိုအားသွင်းဖို့ပိုထက်ငါးနာရီယူပြီး. The Wi-Fi and Bluetooth worked as you might expect. တစ်ဦး microSD card slot ပိုပြီးသိုလှောင်မှုကိုဖြည့်စွက်ဘို့ရရှိနိုင်ပါသည်.
တစ်ပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင်အာရုံခံ၏မရှိခြင်းနောက်ခံအလင်း၏ကို manual ညှိနှိုင်းမှုလိုအပ်နေပါသည်ဆိုလိုတယ်, အထူးသဖြင့်တောက်ပတဲ့နေရောင်ထဲမှာဒါမှမဟုတ်ညနေပိုင်းအတွက်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ Fire တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာကို Fire HD ကိုအဖြစ်အမေဇုံရဲ့ Android 5.1.1-based OS ကို Fire က၏တူညီသောဗားရှင်း့လှစ်ထား 10. ဒါဟာအကြောင်းအရာနှင့်ဂိမ်းများမှရတဲ့မြန်ဆန်လွယ်ကူစေသည်.
ကိုယ်ကသာအမေဇုံရဲ့ App store ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပါတယ်, သို့သော်, Google ရဲ့ Play Store နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သင်တို့ applications များနှင့်ဂိမ်းများ၏သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက်ကန့်သတ်ထားပါသည်ဆိုလိုတယ်. အများစုဟာ, but not all of the top apps are available, as are streaming video services such as Netflix.
သငျသညျမြျှောလငျ့စခွေငျးငှါအဖြစ်, Amazon’s integration of its own video, ဂီတ, books and shopping services is excellent.
The cameras are poor, only really good enough for Snapchat. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
The 2-megapixel camera on the back is terrible. It produces images of about the same quality and detail asaCCTV camera, နှင့်မကောင်းတစ်ဦးတယောက်ကို. အဆိုပါ VGA က selfie ကင်မရာကိုဆိုနိုင်သည် သာ. ကောင်း၏, ဒါပေမယ့်အများကြီး ဆို. မရင့်.
အမေဇုံ Fire ကယ့်£ 50 ဦးကုန်ကျနှင့်အနည်းငယ်ရယ်စရာအတွက်ရရှိနိုင်ဖြစ်ပါတယ် "ငါးခုအခမဲ့ရမဝယ်" (BFGOF) ကမ်းလှမ်းမှုကို. အဆိုပါ Tablet ကိုသော့ခတ် screen ပေါ်မှာကြော်ငြာနှင့်အတူကြွလာ, သို့သော်, သူတို့နှင့်မဖယ်ရှား£ 10 ပဲကုန်ကျ.
£ 70 က Samsung သို​​့မဟုတ် Asus ကကုန်ကျစရိတ်အထက်သို့ကနေအနီးဆုံး branded တက်ဘလက်များ.
It’s notafantastic tablet by any stretch of the imagination. The screen is low resolution, the battery doesn’t last that long, its cameras are woeful, ဒါကြောင့်မိုးသည်းထန်စွာနှင့် chunky င်နှင့်ကသာအသုံးပြုသူမှလက်လှမ်းပြည်တွင်းရေးသိုလှောင်မှု 5GB ရှိပါတယ်.
ဒါဟာအဘယ်သူမျှမက iPad သို့မဟုတ်ပင်ကို Nexus င် 7, ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုကြာရှည်လိမ့်မည်တကယ်ကသင်ရုံတမဝယ်နိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လျှင်အရေးမပါဘူးနဲ့တူခံစားတဲ့စျေးပေါနှင့်ရွှင်လန်းသော 7in တက်ဘလက်င်.
သငျသညျဗီဒီယိုအတွက် Amazon ရဲ့ချုပ်ဝန်ဆောင်မှုစာရင်းသွင်းလျှင်ကိုယ်ကသာတကယ်သဘာဝကျပါတယ်, စာအုပ်များနှင့် app များ, ဒါပေမယ့်£ 50 ဦးမှာတစ်ဦးအရင်းခံတွန်းအားဝယ်မယ့်.
အကောင်းအဆိုး: စျေးပေါ, Amazon ကဗီဒီယို, စာအုပ်တွေနဲ့ဂီတန်ဆောင်မှုများ, microSD card slot, တာရှည်ခံခံစားရ
Cons: အနိမ့်-res မျက်နှာပြင်, လေးလံသော, chunky, ဆင်းရဲသောသူကိုကင်မရာများ, အားသွင်းဖို့အသက်အရွယ်ကြာ, ဘက်ထရီသက်တမ်းစိတ်ကူးမဟုတ်
အဆိုပါ Tablet ကို microUSB ကနေတဆင့်အားသွင်းဖို့ငါးခုကျော်နာရီကြာ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
Amazon.com, Android မှာ, အပိုဒ်, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, ရှမွေလသည် Gibbs, တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာများ, နည်းပညာ
← Blackphone2ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: privacy ကိုအသုံးဝင်မှုရှိစေရန်၏ကုန်ကျစရိတ်မှာလာရန်ရှိသည်ပါဘူး Facebook ကစမ်းသပ် Messenger ကိုအတွက် Snapchat စတိုင် Self-destructing ချက်တင် →